Monday October 15, 2018 - 19:57:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya Turkiga ayaa sheegaya in khubarada dambi baarista iyo ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada ay gudaha ugaleen qunsuliyadda halkaas oo laga baadi goobayo qaabkii loo dilay wariye Jamaal Khashoggi.
Mas'uuliyiin Turki ah ayaa warbaahinta u sheegay in baaritaannada ay u adeegsan doonaan qalab casri ah oo lagu ogaan karo dhiigga ku daatay gudaha qunsuliyadda xataa haddii ladhaqo.
Wariyaal ayaa sheegay in saacado ka hor intii aysan saraakiisha Turkiga gudaha ugelin Qunsuliyadda ay arkeen qalabka nadaafadda oo mas'uuliyiin sacuudiyaan ah gelinayaan dhismaha qunsuliyadda waxaana loo badinayaa in ay ku dhaqayeen halkii lagu dilay wariye Khashoggi oo ahaa mucaarad aad ugasoo horjaaday nidaamka Boqortooyada Aala Sacuud.
Goor sii horraysay madaxweynaha Turkiga ayaa khadka taleefanka kula hadlay Hoggaamiyaha Sacuudiga waxayna ka wada hadleen qadiyadda ku aaddan saxafiga lala'yahay.
Maamulka Sacuudiga ayaa cadaadisyo dhanka siyaasadda ah oo aan horay loo arag kala kulmaya dowladaha reergalbeedka waxayna cadaadisyadaas ka dhasheen markii saraakiisha ammaanka ay si fool xun u khaarijiyeen saxafi mucaarad ah oo dhanka reergalbeedka ujanjeeray.
Saamiyada Seyladaha suuqyada sacuudiga ayaa hoos dhaca laga dareemayaa iyadoona shirkado Mareykanka iyo Yurub laga leeyahay ay ku dhawaaqeen in dhaqaalahooda ay kala baxayaan dhulka Sacuudiga sababa la xiriira dilkii wariye Jamaal Khasoggi.
Sawirro: Sida looga Ciiday Magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug.